कृष्ण रेउलेसँगको अन्तवार्ताः प्रेम प्रस्ताव आएको छ कि छैन ?
Thursday, 8 Oct, 2015 3:52 PM
लोक गायक कृष्ण रेउले लोक संगीतमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । उनि गायक मात्र हैन कुशल नृत्यकार अनि लेखक र संगीतकार पनि हुन् । अचेल उनको माग बढ्न थालेको छ बहुमुखी प्रतिभाको धनि भएर होला स्टेज कार्यक्रम अनि महोत्सबहरुमा समेत उनि ब्यस्त हुन् थालेका छन् । त्यसको अलावा उनि आफ्नो प्रतिभा र देशको लोक संस्कृति देखाउन विदेश समेत पुगिरहेका छन् । उनै रेउले सँगे किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीः
कलाकार मान्छे, दैनिक कार्यक्रममा व्यस्त छु । अनि संगित क्षेत्रमा नै रहेर अघि बढेको छु । अहिले नयाँ गीतको तयारी मा छु ।
हालसम्म मैले आफ्नै लगभग ३०, ३५ वटा एल्बम निकाले होला । त्यस्तै अरुको एल्बममा पनि स्वर दिएको छु ।
अहिलेको अवस्थामा मेरो आउला दशैमा, रोधी धाउनाले, चिट्ठीमा फोठो पठाउ, देखेपछि माया पलाउँछ, सरर मलेवा, दिलको ढोका खुल्ल छ, बिना स्वादैको, बाधुकी मायाको डोरिले यहि त होला माया भनेको, लगायत...!
सबै भन्दा मानिसको इच्छा ठूलो हो मेरो सपना र इच्छ्याले यो क्षेत्रमा लागे ।
प्रेम एउटा भावना होअनि प्रेम एउटा एक अर्कामा समर्पित भावना हो जस्तो लाग्छ ।
प्रेम प्रस्ताव आएको छ कि छैन ?
हामि कलाकार हौ यस्ता प्रस्ताब त आउछ नै तर त्यो प्रस्ताब मलाई नभईकन मेरो कलाकरिता लाई आएको भन्ने बुझ्छु, किन कि म अलि नराम्रो छु जस्तो लाग्छ हा... हा... ।
प्रेम आफैमा राम्रो हो प्रस्ताब आए स्वीकार्छु तर गलत रुपमा प्रयोग गर्दिन..।
एउटा कलासंगीतमा लागेको मान्छेको योजना के हुन्छ र मेरो आगामी योजना नयाँ गीत गर्ने त्यसैको प्रमोड गर्ने अनि यहि क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने योजना छ...!
लोक संगीतमा बिकृति आयो भन्छन् नि के छ तपाइको बिचार ?
यदा कदा बिकृतीहरु हरेक क्षेत्रमा छन, अनि हाम्रो गीतसङीतमा पनि छन ती कुराहरुलाई सुधारेर लैजानु हाम्रै जिम्मेवारी हुन्छ...!
बिकृती रोक्न राज्यले चलचित्र बिकास बोर्ड बनाइदिएको छ, त्यस्तैै गीतसङ्गीत बिकासबोर्ड बनाउनु अति आबश्यक छ, तर यो कुरामा हामि सबै एक भएर लाग्नुपर्छ ।
किन होला काठ क्षेत्रका कलाकार अगाडी बढ्न नसकेका ?
यस्को क्षेत्र पनि सानो छ, अनि यो क्षेत्रमा लागेका सर्जकहरु पनि निरन्तर यो क्षेत्रमा लागेर मेहनत गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ..!
सर्जकलाई हरेक सिर्जनाको आशा उतिनै हुन्छ, यो गर्दै गरेको गीतबाट पनि धेरै आशा गरेको छु, बाकी जिम्मा दर्शक स्रोतामा भर पर्छ ।
कलाकारिता के हो?
यो कुरामा सबैको आआफ्नै भाषा हुन्छन तर मेरो बिचारमा चाहिँ कलाकारिता भनेको एउटा यस्तो चिज हो जस्को माध्यमबाट, हरेक भावनालाई एउटा कलाको सुन्दर प्रखर भुमिका बाट दर्शक स्रोतामा सजिलै मन मुटु छुनेगरी प्रस्तुत हुन्छ ।
यात्रा गर्दा के छुट्दैन ?
यात्रा गर्दा आजको जमानामा पर्स र मोबाईल छुट्दैन ।